कोरोनाले सहारा खोस्दा बिचल्ली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोनाले सहारा खोस्दा बिचल्ली
भारतमा रोजगारी गरेर परिवार पालिरहेकाहरुको मृत्यु भएपछि खान, लाउनकै चिन्ता
बझाङमा कोरोनाले समस्यामा परेकाको तथ्यांक संकलन गरिँदै
श्रावण २, २०७८ गणेश चौधरी, वसन्तप्रताप सिंह
टीकापुर, बझाङ — आशाराम चौधरी सिलाइकटाइको काम गर्थे, अनिता घरको । अनिताको एउटा खुट्टाको भर छैन, त्यसैले आशारामले सकभर उनलाई काम कम लगाउँथे । १० र ५ वर्षका छोरीछोरा, वृद्ध आमाबाबु पाल्न चौधरी दम्पतीलाई आम्दानी मनग्गे त थिएन तर हाँसीखुसी गुजारा भने चलेकै थियो । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–२ का आशारामको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएपछि अहिले परिवारको बिजोग छ ।
कैलालीको जानकी–२ का आशाराम चौधरीका श्रीमती अनिता, छोराछोरी र बुबा । तस्बिर : गणेश/कान्तिपुर
आशारामको रिक्ततामा आम्दानी गर्ने नहुँदा हातमुख जोर्नै गाह्रो परेको छ । ‘श्रीमान्ले गर्ने सिलाइकटाइको आम्दानीले रोजीरोटी चलिरहेको थियो,’ २७ वर्षीया अनिताले भनिन्, ‘घर छ, खानलाई आम्दानी हुनैपर्छ । अब कसरी बाँच्ने ?’ घर कसरी चलाउने, छोराछोरी पढाउने खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । ‘उहाँ (आशाराम) भएका बेला म पनि सीप सिक्छु भन्दा म छँदै छु, दुःख गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो, अब त पूरै अन्धकार भयो,’ उनले भनिन् ।
आशारामको दुई महिनाअघि निधन भएको हो । त्यसबेला अन्तिम संस्कारमा आफन्तले सहयोग गरेका थिए । ‘हामी थारूको मर्नीकर्नी (अन्तिम संस्कार) मा धेरै नै खर्च लाग्छ । त्यो सबै गोतियारले गरिदिए,’ उनले भनिन् । त्यसयता कतैबाट सहयोग नपाएको उनले सुनाइन् ।
यस्तै, टीकापुर–१ का युवक किरण केसीलाई कोरोना संक्रमण भयो । किरण बिरामी भएपछि उनकी आमा चन्द्राले उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिन् । छोराको स्याहार गर्दागर्दै संक्रमित भएकी उनको मृत्यु भयो । आमाको निधन भएको केही दिनमा छोराको पनि ज्यान गयो । दुवै आमाछोरा नरहेपछि परिवारमा बिचल्ली छ । किरणका श्रीमती र दुई बच्चा छन् । दुवै आमा–छोराले टीकापुरमा सानो होटल गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए । उनीहरूको परिवारमा व्यवसाय गर्ने दुवै जना बितेपछि अहिले संकट भएको किरणकी दिदी सुशीलाले बताइन् ।
‘कमाएर गुजारा गर्ने कोही रहेनन् । अब जरै नभएपछि त कसरी अडिने,’ उनले भनिन् ‘अरू आयस्रोत केही पनि छैन । सानो व्यवसायकै भरमा कान्छो भाइ एमए पढ्दै थियो । बुबा ६३ वर्षको हुनुहुन्छ । अब कसरी छाक टार्ने भन्ने समस्या भयो ।’
टीकापुरको बसपार्कमा रहेको उनीहरूको होटल आमा र भाइको मृत्युपछि अझै बन्द छ । सुशीलाले भनिन्, ‘हाम्रो समाज ठीक छैन । छोरी मान्छेले मात्र कसरी होटल चलाउन सक्छन् । छोरी मान्छे मात्र होटलमा भए भने त्यसै हेला गर्छन् ।’ आमा र भाइको स्याहारमा खटिएकी सुशीला पनि संक्रमित भएकी थिइन् । ५ दिन अस्पताल बसेर घर आएकी हुन् ।
जानकी–२ का वडासदस्य ४२ वर्षीय मदारुद्दिन जागा जनप्रतिनिधि भएकाले कोरोना महामारी फैलँदा समुदायको अगुवाइमा खटिएका थिए । संक्रमणबाट उनको मृत्यु भयो । अहिले परिवारलाई खानलाउन समस्या परेको छ । कैलालीमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका अधिकांश आफन्तका पीडा समान छन् । कमाउने सदस्य नै गुमाएपछि अधिकांश परिवारमा आर्थिक समस्याले बालबालिकाको पढाइका साथै उनीहरूलाई खानलाउन नै समस्या छ । कोरोनाबाट आफन्त गुमाएका परिवारलाई सान्त्वना दिन कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले किरिया खर्च सहयोग गरेको छ । संक्रमणले आफन्त गुमाएर पीडामा रहेकाहरूको मनोबल बढाउन नगरपालिकाले राहतस्वरूप १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले बताए । उनले भने, ‘कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाहरूको घरमै गएर राहत रकम हस्तान्तरण गर्ने र काउन्सिलिङको काम पनि गरेका छौं ।’
परदेशमा चुँडियो सहारा
केही समय परदेशमा कमाइ गर्ने र फर्किएर परिवारलाई सुखले पाल्ने इच्छा थियो, खप्तड छान्ना गाउँपालिका–७ गडरायका जनक रोकायाको । श्रीमती र दुई छोरी लिएर उनी भारतको बैंग्लोर पुगे । एक घरमा चौकीदारी गर्थे । श्रीमती बिहान–साँझ सरसफाइ गर्थिन् । दुवै मिलेर लाउनखान पुग्ने कमाइ गर्थे । छोरीहरूलाई उतै पढाएका थिए । परिवारको खर्च कटाएर बचेको रकम आमाबुबाका लागि नेपाल पठाउँथे ।
गरिबीका कारण छोरा हुर्काउन निकै कष्ट भोगेका ६७ वर्षीय बुबा नरबहादुर रोकाया र ६५ वर्षीया आमा कम्पनीदेवी जनकको कमाइले खुसी नै थिए । रोकाया दम्पतीको खुसी धेरै टिक्न पाएन । गत जेठमा कोरोना संक्रमणबाट जनकको मृत्यु भयो । उनका श्रीमती र दुई छोरी नेपाल आउने खर्च अभावमा भारतमै एक आफन्तको शरणमा बसिरहेका छन् । ‘बुढेसकालको सहारा दैवले चुँडिदियो । हाम्रो त टेक्ने भुँइ पनि रहेन, समाउने हाँगो पनि रहेन,’ कम्पनीदेवीले भनिन्, ‘यो उमेरमा आएर बेसहारा भयौं ।’ अहिले आफूहरूले छिमेकीको सहयोगमा छाक टारिरहेको उनले बताइन् ।
भारतमा ज्यान गमाएका बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका–७ गडरायका जनक रोकायाकी आमा र छोरी घरमा । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर
चैत अन्तिम साता भारतको उत्तराखण्डस्थित खडीखानबाट फर्किएका मस्टा गाउँपालिका–५ का ५५ वर्षीय शेरबहादुर ओखेडालाई कोरोना संक्रमण भयो । वैशाख पहिलो साता जिल्ला अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो । भारतमा मजदुरी गरेर उनले ११ जनाको परिवार पालिरहेका थिए । अहिले परिवारको बिजोग छ । ‘बुबा गुमाएको पीडा त छँदै छ । उहाँ गइसकेपछि हामीलाई खानलाउन पनि समस्या भयो,’ छोरा गोपालले भने, ‘एक जनाको कमाइले परिवार धान्न मुस्किल भइरहेको छ ।’ जयपृथ्वी–६ नौरागाउँका ४८ वर्षीय रामबहादुर सिंहले पनि कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए । भारतको तामिलनाडुमा मजदुरी गरिरहेका उनको भरमा सात जनाको परिवार थियो । ‘कमाउने मान्छे नै नरहेपछि परिवारको बिल्लीबाठ भयो,’ उनका आफन्त नरेन्द्र सिंहले भने ।
कोरोनाका कारण परिवारको मुख्य सहारा गुमाएपछि रोकाया, ओखेडा र सिंहको परिवार मात्रै होइन बझाङका धेरै परिवार यस्तो बिचल्ली परेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म बझाङमा २० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोनाको जस्तै लक्षणले मृत्यु भएकाको संख्या ४० भन्दा बढी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भानुभक्त जोशीले बताए । मृत्यु हुनेमध्ये धेरैजसो भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरू छन् । ‘भारतमा मात्रै ३५ भन्दा बढी बझाङका मान्छेको मृत्यु भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने ।
थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले अब तथ्यांक संकलन गर्न थालिएको बताए । ‘कमाइ गर्ने मान्छेको परदेशमै मृत्यु भएपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पालिकाका मात्रै ८/९ जनाको भारतमा मृत्यु भएको भन्ने खबर आएको छ । यस विषयमा गाउँगाउँमा बुझ्दै छौं ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बझाङबाट भारतमा रोजगारीका लागि वार्षिक करिब ४० हजार जना जाने गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण चैतयता मात्रै १५ हजार जनाभन्दा बढी जिल्ला फर्किएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ १०:१५
श्रावण २, २०७८ ठाकुर बेलबासे
ठाकुर बेलबासे — पौराणिककालमा जन्मिएको बृकासुर शक्तिको उन्मादमा आफैं भस्म भएर देवलोक जोगियो अझ सुन्दर कुरा त देवका पनि देव महादेव बाँचे एउटा सभ्यताका लागि गम्भीर अनिष्ट रोकियोमहादेवको वध भएको भए सम्झौं त एउटा संस्कृति क्रूरताबाट शासनको परम्परामा बाँधिन्थ्यो धन्न धन्न बृकासुरबाट बचे महादेव !
आज उनै शिवजी
कतै बाढीमा बग्दै छन्
पहिरोमा झर्दै छन्
आगोमा जल्दै छन्
बृकासुरले उनको वध गरेर
पार्वती गर्भाधान भएकी भए
आज संसारमा राक्षसहरुको साम्राज्य हुन्यो होला
कुनै पौराणिक कथाको पात्र होइन
देवलोकको तिलस्मी पात्र पनि होइन
जो आफैं भस्म भएर
भस्मासुर नामले अपहेलित बनेको होस्
आधुनिक मानवलोकको बृकासुर
ऊ कुनै व्यक्तिसँग लड्दै छैन्
उसका गणनामा आउँदैनन्
यसकारण ऊ राज्यमा हिनहिनाउँदै छ
उसलाई यो हावा, वातारण, उज्यालो
खपिनसक्नु भएको छ
सूर्यलाई कच्याककुचुक पारेर
आफ्नो शौचालयमा कैद गर्न चाहन्छ
बैठककक्षमा कार्पेट ओछ्याउन चाहन्छ
ताराहरुको माला उनेर
आफ्नी प्रियसीलाई खुसी बनाउन चाहन्छ
आधुनिक बृकासुर सामान्य छैन
उसलाई राज्य मन पर्दैन
ऊ आफैं संविधान हो, आफैं कानुन हो
देवताहरुको घाँटी रेटेर
ऊ मन्दिरहरु भत्काउन सक्छ
या मन्दिर बनाउन सक्छ
आफ्नै मूर्ति राख्नका लागि
उसलाई मनिसका जीवनहरु गौण लाग्छन्
बग्दै गरेको नदीको बहावलाई रोक्न चाहन्छ
अँध्यारो चिर्दै गरेको जूनलाई
बाथरूममा झुन्ड्याउन चाहन्छ
नागरिकका आँखाका नानीहरु फ्राई गरेर
नागरिकको रगतसँग चपाउन हौसिएको छ
ऊ निर्वस्त्र छ
र, सिंगो देशलाई नाङ्गो पार्दै छ
बृकासुरको शासनबाट शासित छौं
बृकासुरका अवतारहरु झन्झन् खतरनाक बन्दै आएका छन्
आफ्नै शक्तिको दुरूपयोगबाट आफैं भस्म भएको देख्न
अभिशप्त हामी, महादेवजस्तो
भागिरहेका छौं  !
प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ १०:१४